ခရောင်းတောလယ်က မြေကပ်ပန်းလေးတွေ.. | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » My Dear Diary » ခရောင်းတောလယ်က မြေကပ်ပန်းလေးတွေ..
Posted by ကျော်စွာခေါင် on Mar 31, 2014 in My Dear Diary | 19 comments
ကျနော်တို့ ပါတ်ဝန်းကျင်မှာ ကလေးတွေ များစွာရှိနေကြပါတယ်…
ဒီကလေးတွေရဲ့ အနာဂတ် တွေကိုလဲ ကြိုတင်မြင်နိုင်သလို ဝေး၀ါးနေတဲ့ကလေးတွေရဲ့ ဘ၀ကိုလဲ မြင်တွေ့ နေရပါတယ်…။ အနာဂတ်အတွက်ကောင်းမွန်ပြည့်စုံသော နေရာ မှာ ရောက်ရှိနေထိုင်ကြတဲ့ကလေးတွေ ရှိနေသလို ဘာကိုမှ ကြိုတင်တွက်ဆလို့ မရတဲ့ဘ၀နဲ့ ပါတ်ဝန်းကျင်မှာ နေထိုင်ရသူတွေလဲ ရှိနေပါတယ်..။ အထူးသဖြင့် မြန်မာနိုင်ငံက ကလေးများစွာရဲ့ အနာဂတ်ကို မိဘအရင်းတွေတောင် ကြိုတင်မမြင်နိုင်တဲ့ ဘ၀ပါ..။
ကျနော်က မပြည့်စုံတဲ့ ဘ၀လေးတွေထဲက ကလေးတွေကို ပိုစိတ်ဝင်စားပါတယ်..။ သူတို့ မှာ ကောင်းမွန်သော အနာဂတ်တွေ ကိုယ်စီရှိနိုင်ပေမယ့်၊ ကြီးပြင်းရတဲ့ ဘ၀၊နေရာ၊ ပါတ်ဝန်းကျင် တွေရဲ့ ပန့် ပိုးမှု၊ ဖိအားတွေဟာ ကလေးတစ်ယောက်ကို အမြင့်တစ်နေရာကိုလဲ ရောက်စေနိုင်သလို ၊ သူလိုက်ိုယ်လို အရွယ်နဲ့ မမျှအောင်ရုန်းကန်နေထိုင်ကြတဲ့ဘ၀၊ နိမ့်ပါးတဲ့ ဘ၀ကိုလဲ
ကိုယ့်သားသမီး၊ ကိုယ့်ကလေးတွေရဲ့ ဘ၀ကိုသာ မကဘဲ နီးစပ်ရာနိုင်သလောက်လေး ဖေးမ ကူညီသွားနိုင်ကြမယ်ဆို ရင် ဥပေက္ခာပြုပြီး သူ့ ဘ၀နဲ့ သူလာတာပါ လို့ ဖြေပြော”ပြောနေတာထက်တော့ ပိုမို အကျိုးရှိနိုင်ပါတယ်…။
ကျနော်ကြီးကျယ်ခန်းနားစွာ နိုင်ငံနဲ့ ချီပြီး လုပ်ခဲ့တာ မဟုတ်ပေမယ့် ကျနော် လုပ်ခဲ့တာလေး၊ ကူညီခဲ့တာလေးကို အခုချိန်ထိ ပြန်တွေးတိုင်း ပီတိဖြစ်နေသလို ၊ ကလေးတွေရဲ့ ဘ၀လေးတွေကို အရောင်တင်မြှင့်တင်ပေးနေသူအားလုံးကိုလဲ ပိုပြီး လေးစားမိပါတယ်…။ ဒါကြောင့်လဲ ဒီစာလေးကို ရေးမိတာပါ…။
ကျနော်ကခဲ့တုန်းအချိန်က..ဇာတ်ထဲမှာ လူစုံပါကြပါတယ်…။ အနုပညာ အတတ်ရှင်၊ မီးပညာရှင် ၊စက်ပိုင်းဆိုင်ရာ ပညာရှင်နဲ့ အခန်းအနားဆက်တင် ပညာရှင်တွေ ပါခဲ့ပါတယ်..။ ဇာတ်ထဲမှာကလဲ မီးပညာရှင်ဆိုရင် မီးသမားလို့ ဘဲခေါ်ကြတာပါ…ထို့ အတူ..စက်သမား၊ ယိမ်းသမ လို့ ခေါ်ကြပါတယ်..ဒါပေမယ့် ဇာတ်တစ်ခွင်လုံး လူကြည့်ချင်လာအောင် ၊မြင်တွေ့ ရတာနဲ့ ခမ်းနားမှုရှိအောင်
ညဘက်ကပြချိန်မှာလဲ ပံ့ပိုးမှုကောင်းအောင် အတတ်ပညာနဲ့ကူညီနေကြတဲ့ဆက်တင်နဲ့ ကား(နောက်ခံနှင့် ကလကာ ကားလိပ်များ)ဘက်ဆိုင်ရာ တွေကိုတော့ ကားဆွဲတွေ လို့ ဘဲ ခပ်နှိမ်နှိမ်ခေါ်ကြပါတယ်..။
ဒီအခေါ်အပြောကို ကျနော်က မကြိုက်ပါဘူး…ဒါပေမယ့် အများနဲ့ တစ်ယောက်ဆိုတော့ ဒီသတ်မှတ်ချက် အခေါ်အဝေါ်ကို ပြင်လို့ မရပါဘူး…။
သူတို့ ဘ၀တွေက ပင်ပန်းလွန်းပါတယ်…ညဆိုလဲအိပ်ရတယ်မရှိ မိုးအလင်း တာဝန်ယူရတာ…
့တာဝန်ခွဲဝေယူပြီး အိပ်ကြတယ်ဆိုရင်တောင် နှစ်ပါးသွားစထွက်ပြီးမှ သူတို့ အိပ်ရတာပါ..။
ဇာတ်စထွက်ကတည်းက အော်ပဒါ ပြဇာတ်တွေဆို သူတို့ ပင်ပန်းတယ်…တွန်းဟယ်ရွှေ့ ဟယ်နဲ့နားရတယ်မရှိပါဘူး…
ဒီကြားထဲ ကြက်တူရွေးကတော်တော် မယ်ဘော်က ကဲကဲ အော်ငေါက်သူ၊ ပါဝါအာဏါပြသူတွေ အော်ကြဆဲကြလဲ ခံရသေးတာ..။
ကျနော်ကတော့ အားလုံးကိုတန်းတူပေါင်းတယ်…ဆုငွေတွေအများကြီးရလာရင် လ္ဘက်ရည်တိုက်တယ်..မုန့် ကျွေးတယ်…။
လူကိုလူလိုဆက်ဆံတော့လဲ သူတို့ ကိုယ်တိုင်က ပိုပြီးကိုယ့်ကိုခင်မင်ကြပါတယ်…။
အဲဒီ ကားအဖွဲ့ ထဲမှာ ငပယ်လို့ ခေါ်တဲ့ သူတစ်ယောက်ရှိတယ်…သူက ကားဘက်ဆိုင်ရာက၊ သူ့ မိန်းမက ဇာတ်ထဲကမဟုတ်ပေမယ့်
ဇာတ်နောက်လိုက်နေတာ…ပြီးတော့ ဈေးရောင်းတယ်.ပွဲခင်းထဲမှာပေါ့..။ သူတို့ ပူဖောင်းရောင်းချင်တယ်ဆိုလို့အရင်းကို ကျနော်ဘဲ ထုတ်ပေးခဲ့တာပါ..။
သူတို့ ကလေး၃ယောက်လားရှိတယ် အိမ်မှာဘဲ အဘွားနဲ့ နေကြတာပါ ။ ကျောင်းပိတ်ပြီဆို သူတို့ မိဘတွေရှိရာကို လိုက်လာကြတတ်တယ်..ဒါပေမယ့် ဇာတ်ရုံဘေးနားမှာဘဲ ဆိုင်ခန်းလေးလုပ်ပြီးနေကြတာပါ…။
ကလေးတွေက နေ့ လည်ခင်း အဖွဲ့ သားတွေ အိပ်ရေးဝလို့အိပ်ယာထပြီးကြရင်တော့ ဇာတ်ရုံထဲမှာ ကစားတတ်တယ်..တခါတလေ ဇာတ်ခုံပေါ်မှာ တက်ဆော့ကြပေါ့…။
တစ်နေ့ တော့ ကျနော်က အိပ်ယာထပြီးလို့ အပြင်မှာ လ္ဘက်ရည်သောက်ပြီး ပြန်ဝင်လာချိန်မှာ ငပယ်နဲ့ မီးဘက်က မြင့်ဝေနဲ့ စကားများနေကြတယ်…ငပယ်ရဲ့ သားလေး( အသက်၁၃ နှစ်အရွယ်) လေးက ငိုမဲ့မဲ့နဲ့..။ သူ့ အမေကလဲ သူ့ ဘေးမှာ မျက်ရည်ဝိုင်းနေတယ်.။
“ အို…ကားဆွဲသားက ကားဆွဲဘဲ ဖြစ်မှာပေါ့…ဘာ က”စရာလိုလဲ…” ဒီစကားကြားလိုက်တော့ စိတ်ထဲမှာ ဖျဉ်းကနဲဖြစ်သွားတာ။
ကိုယ်ကလဲ ဒီလိုဖြစ်နေတော့ မျက်နှာလွှဲနေလို့ မတတ်ပါဘူး…
“ ကလေး ဆော့ရင်း သေတ္တာပေါ်မှာ က”နေတာကို မြင့်ဝေ ပြောလို့ ကိုငယ်”
“ မဟုတ်ဘူး မင်းသား…သူ့ သား အလကားနေရင်းဆော့နေလို့ ကျနော်ပြောတာ ”
“ သူ့ ဘာသာ ကနေတာ ဘာဖြစ်လဲ” ငပယ်က ထပ်ပြောတာပါ..။
“ အေး…က တာကိုပြောတာ။ ကားဆွဲသားက ကားဆွဲဘဲ ဖြစ်မှာ…”
“ မင်း ဒီလိုမပြောနဲ့ငါ့ကလေးတွေကို ပညာတတ်အောင် ကျောင်းထားပေးတာဘဲ…မင်းနှိမ်တာတော့ မကောင်းဘူး…”
“ ခဏနေဦး ..ငပယ် ၊ ငါပြောမယ်..ကိုမြင့်ဝေလဲ နားထောင်”
“ ခုနက ကိုမြင့်ဝေ ပြောတာ ကျနော် ကြားတယ်…ကားဆွဲသားက ကားဆွဲဘဲဖြစ်မယ်ဆိုတာ..၊ အဲလို ပုံသေပြောလို့ မရပါဘူး…ပြောလဲမပြောသင့်ဘူး။ ကျနော့်အဖေကစစ်သား…ကျနော်စစ်သားမဖြစ်ဘူး…မင်းသားဖြစ်ခဲ့တယ်..၊ ကိုမြင့်ဝေအဖေရော ဘာအလုပ်လုပ်လဲ”
“ လက်သမားဆရာပါ ကိုငယ်..”
“ ခင်ဗျား…ဘာကြောင့်လက်သမားမဖြစ်ဘဲ…မီးထိုးသမားဖြစ်နေတာလဲ ”
“ ဒါကတော့…..” သူဘာဆက်ရမှန်းမသိဖြစ်နေပြီ..။
“ ကျနော် က ကိုမြင့်ဝေကို ပြောချင်တာ ၊ ပါတ်ဝန်းကျင်ကိုကြည့်ပြီး ကလေးတစ်ယောက်ကိုဆုံးဖြတ်လိုက်၊ ပြောလိုက်တာ မကောင်းဘူး”
“ ကိုငယ်ပြောတာ မမှားပါဘူး…ဒါပေမယ့် ဒိကောင်လေးက မဖြစ်နိုင်ပါဘူး…”
“ ဘာဖြစ်လို့ လဲ”
“ သူ့ အဖေက ကားဆွဲ၊ သူ့ အမေက ပူဖောင်းရောင်းတယ်။ ဖြစ်ဘို့ ရာ အဝေးကြီး”
ဒီလူတော့ ဒီဘူတာဘဲ ပတ်နေပြီ…စိတ်ရှိတိုင်းသာဆွဲထိုးလို့ ကတော့ ဒီလူ နာတော့မယ်…။
“ ကဲ…ကောင်းပြီ…တော်ကြတော့ ၊ မင်းတို့ သားအမိလဲ ငိုမနေနဲ့ ဟုတ်လား၊ ကိုမြင့်ဝေလဲ သွားတော့…”
သူတို့ ပြဿနာကို လူစုခွဲ ရှင်းပြီး…ကိုယ့်အခန်းကို ကိုယ်ပြန်လာခဲ့တော့တယ်…။
အခန်းထဲေ၇ာက်တော့ ခုနက အဖြစ်အပျက်ကို စဉ်းစားပြီး ဆုံးဖြတ်ချက်တစ်ခုချလိုက်တယ်…။
“ အောင်အောင်….အကိုလ္ဘက်ရည်ဆိုင်ပြန်သွားမယ်…ပြီးရင် ငပယ်တို့ သားအမိ၃ယောက်လုံး…အကိုခေါ်နေတယ် လ္ဘက်ရည်ဆိုင်ကို လိုက်လာလို့ သွားပြောလိုက်”
ကျနော့်တပည့်လေး(အ၀တ်ခေါက်သူ)ကို သေချာမှာပြီး ဇာတ်ရုံအပြင်ကိုတစ်ခေါက်ထပ်ထွက်လာခဲ့တယ်..။
ဆိုင်ရောက်တာနဲ့ လ္ဘက်၇ည်၎ခွက်မှာပြီး စောင့်နေလိုက်တယ်…။
မကြာပါဘူး သူတို့ သားအမိတွေ မျက်နှာငယ်လေးတွေနဲ့ ရောက်လာပြီး မြေပေါ်မှာဘဲငုတ်တုတ်လေးတွေ…။
“ ရတယ်အကို ကျနော်တို့ အောက်မှာဘဲနေမယ်…”
“ ကျနော်ပြောနေတယ်…ခုံပေါ်မှာထိုင်ဆို..” အဲဒီတော့မှ မရဲတရဲနဲ့ သူတို့ ထိုင်ပါတယ်…။
ကျနော်ထင်တယ် ခုနကဖြစ်တာကို ဆူမယ်ထင်နေကြတာနေမှာ …။ကျနော်သူတို့ ထိုင်ပြီိးတာနဲ့ …လ္ဘက်ရည်သောက်ခိုင်းတယ်၊ ကလေးကိုလဲမုန့် စားခိုင်းတယ်..။
ဒါတောင်သူတို့ ကငြင်းသေးတယ်..မနည်းပြောမှ သောက်ရဲတာ…။
“ ကဲ…ငပယ်..မင်းသားကို ဘာဖြစ်လာမယ်လို့ ထင်လဲ…”
“ ကျနော်လဲ မသိဘူး…ကျောင်းတော့ ထားတာပါဘဲ..ဒါပေမယ့် ကျောင်းစားရိတ်တွေကလဲ မလွယ်ဘူး…သူကလဲ ကျောင်းမပျော်ဘူး”
“ သူက…မင်းသားအကကို စိတ်ဝင်စားလား”
“ က…တော့ က နေတာဘဲ”
“ မင်းတို့ သားကို ငါတပည့်အဖြစ်မွေးပြီး သင်ပေးမယ်ဆိုရင်ကော”
“ ဗျာ….ဟို …ကျနော်တို့ မှာ ပိုက်ဆံ မရှိဘူး…အကို”
“ ငါ..တစ်ပြားမှ မယူဘူးကွာ…သင်ပေးမယ်၊ မင်းရဲ့ သားကိုသာမေး၊ တစ်ကယ် အကပညာကို လိုချင်တာလားလို့ …”
“ သားက တစ်ကယ် က”ချင်တာဦး”
“ အေး…ငါက တပည့်လက်မခံဘူး…ဘာလို့ လဲဆိုတော့ စိတ်တိုင်းမကျလို့ …တော်ရုံဇွဲနဲ့ လဲ ငါ့ ပညာကို မရဘူး…နောက်ပြီး
ကောင်မလေးတွေ ပန်းလာပေးပြီး မိတ်ဆက်တာလောက်ကို အားကျပြီး သင်တာဆို အစကတည်းက မသင်နဲ့ ..”
“ သားတစ်ကယ် ကချင်တာပါ..”
“ မင်း တစ်ကယ်ကချင်တာဆို ကျိုးစား…မင်းကို ခုနက ဦးမြင့်ဝေ ပြောသွားတာ မင်းကြားလား…ကားဆွဲသမားသားက ကားဆွဲဘဲ ဖြစ်မယ်ဆိုတာ”
“ မင်းကျိုးစားလို့ အောင်မြင်ခဲ့ရင်…မင်းမိဘတွေကို လုပ်ကျွေးနိုင်တာပေါ့…ပူဖောင်း ၁၀ညကျော် ရောင်းလို့ ရမယ့်အမြတ်ငွေကို မင်းတစ်ညကရုံနဲ့ ရနိုင်တယ်”
ကျနော့်စကားကြောင့်သူတို့ မိသားစုလေး အံ့သြနေတယ်…ဇာတ်တွေမှာ မင်းသားသင်ပြီဆို ငွေကလဲပေးရတယ်…မိုးတွင်းစားဘို့ ဆန်ကလဲ ပေးရတယ်…မင်းသားမိန်းမချိုးရေကအစခပ်ပေးရတယ်…ကလေးထိန်းပေးရတယ်…ဆဲခံရတာကလဲ မွှန်နေတာပါဘဲ..။
“ ကဲ…ဒီဇာတ်ခေါင်းပြုတ်တာနဲ့ …ကိုယ့်ဆီကိုမင်းတို့ သား လာပို့ ပေး…ဟုတ်လား…”
“ ကျေးဇူးတင်လိုက်တာ အကိုရယ်”
ပြောပြောဆိုဆို ထိုင်နေရာက ထပြီး အတင်း ၃ယောက်လုးံ ထိုင်ကန်တော့နေလို့ မနည်းတားရတယ်…။
တစ်ကယ်တမ်း မင်းသားတစ်ယောက်ပညာသင်စားရိတ်ဟာ မနည်းပါဘူး….နောက်ပြီိး တပည့်အဖြစ်လိုက်နေ၇တာ က ၃…၄နှစ်၊ တစ်ချို့ လဲ ဒါဏ်မခံနိုင်လို့ လမ်းတစ်ဝက်နဲ့ဝါသနာကို စွန့် ပြီး ထွက်သွားတာတွေ အများကြီးလေ…။
ဒီလိုနဲ့ မိုးတွင်းရောက်တော့ သူတို့ သားအမိတွေ ပေါ်ဆန်းမွှေးတစ်အိတ်နဲ့ အ၀တ်ထုပ်လေးနဲ့ ရောက်လာပါတယ်…ဆန်ကိုလက်မခ့ဘူး..ပြန်ယူသွားခိုင်းတော့ ပြန်သယ်၇တာလဲ မော်လမြိုင်အထိ မလွယ်လို့ ပါ…ဆိုပြိး အတင်းထားခဲ့ ပါတယ်….။
ကျနော်က တစ်လကို အလွမ်းပြေ တစ်ခါဘဲ လာခိုင်းတယ်…တော်ကြာ ကလေး သတိရစိတ်များနေ၇င် သင်လို့ စိတ်ပါမှာမဟုတ်လို့ ပါ…။
သူပျော်အောင် ၃ရက်လောက်လွှတ်ထားပေးပြီး…အခြေခံ စသင်ပေးတယ်…သူကလဲတော်တော် ကြောက်နေတာနဲ့ရေခပ်နေတဲ့ တူမ( မဒမ်ဆူးရဲ့ တူမ) ကိုပါဆွဲသင်ပေးတာ…ကောင်မလေးက ၀ါသနာကိုမပါတာ…၊ ကျနော့်ကြောက်တော့ သူပါ ၀င်ရတော့တာ…။
သူတို့ ကို အကသင်တာ မဒမ်က အံ့သြနေတာ…။
ဘာလို့ လဲဆိုတော့ ကျောက်တုံးတွေကို လက်ဆင့်ကမ်း ခါးလိမ်ပြီး ပေးခိုင်းတာ ၊ ခေါင်းပေါ်ကကျော်ယူပြီး တစ်ဖက်ကို ခါးလိမ်ပြီး ပေးခိုင်းတာ…၄ ကွက်သိုင်း အခြေခံတွေ ပေးနင်းတာ…ဒါတွေကြည့်ပြီး….
“ ကို…သူတို့ ကို သိုင်းသင်နေတာလား…သူတို့ ကို အကသင်ပေးမှာလား” လုပ်နေသေးတာ..။
“ မိန်းမ …မသိရင်ကြည့်နေ…ဒါ၃နှစ်သင်တဲ့ ပန်တျာကျောင်း မဟုတ်ဘူး…၃လ ဘဲ အချိန်ရှိတာ ၊ အေး…သိုင်းကွက်တွေကို တစ်ကယ်ကျွမ်းကျင်ရင် မင်း မျက်စေ့ ထဲမှာ က…ကကွက်တွေလို့ မြင်ကြည့်ပေါ့…အခု ဂျက်လီ ကစားနေတဲ့ ဝူရှုး၊ ထိုက်ချိ မယုံရင် မျက်စေ့ ထဲမြင်ကြည့်လိုက်လေ….အခြေခံတွေက …အကွက်တူတယ်…အားအသုံးပြုပုံနဲ့ လက်ချိုးတာဘဲ ကွာတာ….။
ကျနော် တော်တော်မောင်းတာပါ ကလေးတွေ မျက်ရည်ကျချင်နေပြိဆို ဆင်းရဲတဲ့ ဘ၀တွေကိုပြောပြတယ်…ဗီဒီယိုပေးကြည့်တယ်…ကိုယ်တိုင်မုန့် လုပ်ကျွေးတယ်..ဟင်းကောင်းကောင်းချက်ကျွေးတယ်….။
ကျနော် မင်းသားတစ်ယောက်ကို ချမ်းချမ်းစီးစီး ဘိနပ်လျှော်ပေးခဲ့ရတာတွေ ပြောပြပေးတယ်…။
ခေတ်ပေါ်ရှိုးတွေအတွက် ဘရိတ်၊ဂျက်ဆင်အကတွေ ညဆို သင်ပေးတယ်…၊ သေတ္တာက ၊ ကြိုးတန်းက ပုဝါက စတဲ့ မွန်ပြည်နယ် အကြိုက်တွေက အစ သင်ပေးခဲ့တာ…။
ညတိုင်ဆို အကကျင့်ပြီးရင် စာသင်ပေးတယ်…၊ စားတော့လဲ ကိုယ်တို့ နဲ့ အတူတူ တစ်တန်းတည်း…။ ကျနော်က လူတန်းစား ခွဲခြားတာကို တော်တော် မုန်းတတ်တာ..။
၃လ ဆိုတဲ့ အချိန်က ခဏလေးလိုဘဲ…..။
ကျနော်သူ့ ကို စိတ်တိုင်းကျသင်ပေးပြီးတာနဲ့ သူ့ မိဘတွေကို အကြောင်းကြားပြီး ခေါ်လိုက်တယ်…။
“ ကိုယ်ကတော့ မင်းသားတစ်ယောက်တတ်သင့်တာတွေ သင်ပေးလိုက်ပြီ…ပညာဆိုတာတော့ မကုန်တတ်ဘူး….ကိုယ်တိုင်ကလည်းထပ်လေ့လာ၇မယ် ..မိဘတွေကလဲ ထိန်းပေးရဦးမယ်….. အခွင့်အရေးကို ရတိုင်းမယူကောင်းဘူး…ဒါပေမယ့်
အခွင့်အလမ်းကိုတော့ သိမြင်နေရမယ်…ကျိုးစားနေတဲ့ သူအတွက် အခွင့်အရေးဆိုတာ ပေါ်လာတတ်တယ်..အမိအရ ဆုပ်ကိုင်တတ်ဘို့ ဘဲ လိုတာ…ဟတ်လား..”
သူတို့ တွေလည်း ပြောသမျှနားထောင်ပြီး မျက်ရည်လည်ရွှဲနဲ့ ကန်တော့ပြီး ပြန်သွားတယ်..။
အဲဒီနှစ်က ကျနော် အရေးကြီးကိစ္စတွေ ရှိနေလို့ ဇာတ်မကတော့ပါဘူး…။
ကိုယ့်ဝါသနာပန်းချီဆွဲရင်း သူများတွေကို ကူညီရင်းနဲ့ ဘဲ…ဇာတ်လောကနဲ့ အဆက်ပြတ်နေခဲ့ပါတယ်…။
ဒါပေမယ့် ဇာတ်လောကမှာတော့ ကျနော်တပည့်တစ်ယောက်ကို အားခြင်းသင်နေတာ သတင်းပျံ့ နေပါတယ်…
တစ်ချို့ ကလဲ ၃..၄လနဲ့ ဘယ်လိုမှ မဖြစ်နိုင်ဘူး…တစ်ချို့ ကလဲ ကျနော့်ကို လျှော့မတွက်နဲ့ …စုံနေတာပါဘဲ..။
၅လ ကျော်လောက်မှာတော့ ကျနော်ပုံဆွဲနေတုန်း အိမ်ရှေ့ မှာ ကားရပ်သံကြားပြီး….
“ ဦး…” ဆိုပြီး အော်လိုက်သံကြားမှ ခေါင်းမော့ကြည့်တော့….ကျနော့်ကောင်လေးနဲ့ သူ့မိလတွေ နဲ့ အဘွားပါပါလာတယ်…။
ကျနော်မေးတာ မဖြေဘဲ…ပိုစတာ စာရွက်ကြည့်ဖြန့် ပြပါတယ်…။
“ အကို့ သားသူများဇာတ်မှာ ဧည့်သည်အဖြစ်ဝင်ကတာကို ဘားအံဇာတ်က ဇာတ်ဆရာ သဘောကျပြီး ခေါင်းဆောင်မင်းသားအဖြစ်လာခေါ်လို့ လက်ခံလိုက်ပြီ…ဒီမှာ ဇာတ်ပိုစတာတောင် ထွက်အောင်စောင့်ပြီး ဆရာ အံ့သြအောင်လာပြတာ”
ဟုတ်တယ် …ကျနော့်တပည့်မှ ကျနော့်တပည့်၊
ဒါ …ကျနော်ပျိုးလိုက်တဲ့ ပန်းကလေး…။ မင်းသားနာမည်က မျိုးမျိုး…တဲ့ ။
သူတို့ လက်ဆောင်တွေနဲ့ ကန်တော့တယ်…ဆရာ အတွက်ဆိုပြီး ထိုင်းကထုတ်တဲ့ ခြုံစောင် အနီ အထူကြီးတစ်ထည်လဲပါတယ်…
နောက် မဒမ်အတွက် ကလေးတွေအတွက်စုံနေတာပါဘဲ…။
အားနာလို့ မယူပါရစေနဲ့ ပြောလဲ မရပါဘူး…။
ကျနော်တစ်ကယ်က ဒါတွေမလိုချင်ပါဘူး…..ကျနော်လိုချင်တာ ကိုယ်တိုင်ခံစားရတဲ့ ပီတိပါ..။
နောက်ပြန်ကာနီးတော့ သူတို့ ကန်တော့ပါတယ်…။ ကျနော်ကလဲ မှာစရာရှိတာမှာပါတယ်…။
“ မောင်မျိုး…မင်းကို ဦး ဘိနပ်လျှော်ပေးခဲ့ ရတဲ့ အကြောင်းပြောဘူးတယ်နော်..”
“ ဟုတ်ကဲ့ ဦး…”
“ မင်းတို့ သူ့ အတွက်လက်ဆောင် ကောင်းကောင်းဝယ်ပြီး…သူ့ ဆီကိုသွား…မောင်မျိုး…မင်းသူ့ ကို မင်းအဖေ အမေတွေပါခေါ်သွား…ပိုစတာပါယူသွား…ကန်တော့လိုက်….ပါးစပ်ကလဲပြော…”
“ ကားဆွဲသမားရဲ့ သား၊ ပူဖောင်းသည်မသား မင်းသားဖြစ်သွားလို့ လာကန်တော့တာပါ….ဦးပြောလိုက်လို့ ကျနော့်ဘ၀တိုးတက်ခဲ့တာပါလို့ ပြော…ဟတ်လား”
ဒါပါဘဲ….ကလေးတစ်ယောက်ရဲ့ အနာဂတ် ကောင်းကင်….။
ကျနော်နိုင်သလောက်လေးနဲ့ လုပ်ပေးခဲ့ဘူးတယ်…။ တစ်နိုင်ငံလုံးနဲ့ စာလိုက်ရင် မကြီးကျယ်ပါဘူး…သူတို့ ပါတ်ဝန်းကျင်လေးမှာတော့
ကလေးရဲ့ ဘ၀ ပြောင်းလဲသွားခဲ့ပါတယ်….။
ကိုယ်မကူညီနိုင်ရင်တောင်…ကိုယ့်စကားလေးတစ်လုံးနဲ့ ကလေးတွေရဲ့ အနာဂတ်ကို အညွန့် မချိုးဘို့ အရေးကြီးပါတယ်…။ ကျနော်တို့ လက်တစ်ကမ်းမှာ ကလေးတွေ အများကြီးပါ…။
ကျနော်တို့ တစ်ယောက်တစ်လက် ကူညီိကြမယ်ဆို…ကလေးတွေရဲ့ အနာဂတ်လေးတွေလှပမှုပိုများလာမှာပါ…။
ကလေးတွေရဲ့ အနာဂတ်ကို ဘ၀နဲ့ ရင်းပြီး ပြုစုပျိုးထောင်ပေးနေသော….ပန်းပျိုးသူများကို ဂုဏ်ယူလေးစားစွာဖြင့်………
( ကျနော်က ဇာတ်ကတဲ့အခါ တစ်နှစ်လုံး သတ်သတ်လွတ်စားပြီး ပရိတ်သတ် တောင်းဆိုမှုအရ မီးနင်းပြီးကတဲ့ အော်ပဒါ ကပြပါတယ်…ညတိုင်းနီးပါး မီးနင်းပါတယ်..အလှုငွေတွေကို
စုထားပြီး နှစ်ကုန်လို့ ဇာတ်ခေါင်းပြုတ်တဲ့အခါ မိဘမဲ့ကလေးနဲ့ရှင်မပြုနိုင်သူတွေကို နှစ်စဉ် ရှင်ပြုရဟန်းခံ လုပ်ပေးပါတယ်.. ဝမ်းနည်းစရာတစ်ခုက အဲဒီကိုမြင့်ဝေက ရှင်ပြုရဟန်းခံ ပွဲလုပ်ဘို့၃ရက်လောက်အလိုမှာ ရောဂါတစ်ခုကြောင့် ဆုံးပါးခဲ့ပါတယ်..)။( မီးနင်းရတဲ့ ရာဇဝင်လေးကို ကြုံရင် ပြောပြပါဦးမယ်)
ဟုတ်….အကိုရေ….မီးနင်းတဲ့ ရာဇဝင်လေး ရေးပါဦးဗျ…မျှော်နေပါ့မယ်……
“ကိုယ်မကူညီနိုင်ရင်တောင်…ကိုယ့်စကားလေးတစ်လုံးနဲ့ ကလေးတွေရဲ့ အနာဂတ်ကို အညွန့် မချိုးဘို့ အရေးကြီးပါတယ်…။ ကျနော်တို့ လက်တစ်ကမ်းမှာ ကလေးတွေ အများကြီးပါ…။” အဲ့စာသားလေး သဘောကျတယ်….ခမျ…..
ကွန်မန့် ပြန်တာ နောက်ကျနေလို့ ..တောင်းပန်ပါတယ်ဗျာ
ခု မီးနင်းတဲ့ အကြောင်းအတွက် စရေးနေပါပြီ
ရဲရဲတောက် ကေဇီ says:
အိမ်က မေမေက ကျနော့ထက် အလှကြိုက်ပြီး သူ့ဖို့ ဆိုပြီး ပိုဝယ်တာတွေများရင် ….
ကျနော်တို့ မောင်နှမက စ လေ့ရှိတယ်။
အဲဒီ အခါကျ သူကလည်း ပြန်နောက်တယ်။ ဇော်သန့်ကို ပေါ့။
“နင့် အမအတွက် လှဖို့ အချိန်ကျန်သေးတယ်၊ မာမီ အတွက်က လှဖို့ အချိန်နည်းလာပြီ၊ အဲဒီတော့ မာမီကို ဦးစားပေးကြပါ’ တဲ့။
အဲတော့ ဇော်သန့်ပြန်ပြောတာ မှတ်မိနေသေးတယ်။
“မာမီ ဟာက အင်္ဂလန် ဘုရင်မကြီးလိုဖြစ်နေပြီ။ အိမ်ရှေ့မင်းသားက အို သေ တော့ မယ်။ ဘုရင်မကြီး အသက်ရှည်ပုံနဲ့ ချား(စ) မင်းသား ဘုရင် ဖြစ်ပါဦးမလား” ဆိုတာ။
ကျနော်တို့ နိုင်ငံ အနေအထားအရ ကြည့် ဦးလေ။
စစ်ဝတ်စုံနဲ့ ယူရတာ အားမရလို့ အရပ်ဝတ်နဲ့ဆက်ယူတယ်၊ နိုင်ငံ အဆီအနှစ်တွေကို။
နောက် ဘာဆက်ကြံစည်မလဲ တထိတ်ထိတ်နဲ့ ၂၀၁၅ ကို။
ရိုင်းရိုင်းပြောရရင် သေခါနီးတွေ အတွက် စတေးနေရတာ အနာဂတ် မျိုးဆက်တွေ။ ကလေးတွေ။
ဘယ် ဘဝက အညှိုးတွေနဲ့ ဒီလိုလုပ်နေသလဲ စဉ်းစားမရဘူးးးး
သူများနိုင်ငံမှာ ရတနာလို့ သတ်မှတ်ထားခံရတဲ့ ကလေးတွေက ကိုယ့်နိုင်ငံမှာ လမ်းဘေးမှာ။
စောင့်ရှောက်နိုင်တဲ့သူတွေကို ချီးကျူးတယ်။ လေးစားတယ်။
ကိုယ် အဲဒီလောက်မလုပ်နိုင်သေးခင်မှာ လက်လှမ်းမှီသလောက် ကူညီမယ်။
ကိုယ်တိုင် လုပ်ပေးဖို့တော့ ဒီ အဖိုးကြီးတွေ အမြစ်ပြတ်မှ ပဲ။
ဇော်သန့် စကားလေး သဘောကျတယ်
အိမ်နားဆောက်တဲ့ ကန်ထရိုက်တိုက်ကညစောင့်… ယူထားတဲ့မိန်းမက သုံးယောက်မြောက်ဆိုပါလား.. လခလေးကတော့ မဖြစ်စလောက်…. လင်မယားနှစ်ယောက်အတွက်တောင် ဘယ်လိုမှလောက်ငစရာမရှိတဲ့ ၀င်ငွေနဲ့ ကလေးကိုအလကားရတယ်ဆိုပြီးယူထားတယ်ထင်တယ်… အာဟာရမပြည့်တဲ့မိခင်ကလည်း နို့ကောင်းကောင်းမထွက်.. ကြည့်ရတာနဲ့တင် တော်တော်လေးစိတ်ညစ်စရာပါ..
နောက်တခါ… လက်ဖက်ရည်ဆိုင်က အသက် ရ၊၈နှစ်လောက်အရွယ်အလုပ်သမားလေး… ပွက်ပွက်ဆူ.. အငွေ့တထောင်းထောင်းထနေတဲ့.. ကိုယ့်တဖက်စာမကတဲ့ ဖိုပေါ်ကဟင်းခါးအိုးထဲက ဟင်းရည်တွေကို ဈေးဝယ်သူအတွက် ခပ်ထည့်ပေးနေတယ်…. မတော်တဆဆိုပြီး… ဆက်မတွေးရဲဘူး…
တွေ့ခဲ့ရတွေ့ရတာတွေ…တိုက်တိုက်ဆိုင်ဆိုင်… ရွာထဲလည်းစည်းကားနေတဲ့အချိန်ဆိုတော့… တော်တော်လေးကိုအတွေးတွေပွားမိခဲ့ဖူးတယ်..
ဦးခေါင်ရယ်… ဆိုင်ဆိုင်မဆိုင်ဆိုင်… ရေးချင်တာရေးသွားတယ်.. :))
ရေးချင်တာရေးပေမယ့် မြင်ကွင်းတစ်ခုကို ကြည့်မြင်ပြိးမှ ရေးတာဆိုတော့ ဘာကို ပြောချင်တာလဲ ဆိုတာ သဘောပေါက်ပါတယ်
အေးအေးဆေးဆေး ဖတ်ဖို့ သိမ်းလိုက်ပြီဗျို့ 
သိုင်းကျူးပါ..ကို အောင် ရဲ အလင်းဆက်..
ကြယ်ငါးအကြီးကြီးကို ပစ်လိုက်တာပါလား မင်းသားရေ။
ဒါ့အပြင် ကလေးကို လက်စားချေမှု မုန်းတီးမှုတွေ သင်မပေးပဲ
ခွင့်လွှတ်မှု သည်းခံမှုတွေနဲ့ ကိုယ့်ဘ၀ကို မြှင့်တင်တတ်အောင် ပေးလိုက်တဲ့ သင်ခန်းစားကို အကြိုက်ဆုံးပဲ။
အားပေးတာ ကျေးဇူးပါ မမ
ကွန်မန့် လေးနဲ့ အားပေးတဲ့ ကျနော့်အကိုကို ကျေးဇူးပါ
တတ်လွယ် သိလွယ်တယ်ဆိုတာ ယုံပြီဗျာ
ကိုခေါင့် ရဲ့ စာတွေ ဖတ်မိတိုင်း
အား တစ်ခုခုတော့ ရ လိုက်တယ်
လာတုန်းက တွေ့လိုက်ရမှာ ဗျာ…
ကျနော်လဲ ဆုံတွေ့ ချင်ပါတယ်
ကျနော် တစ်ခါမှ ပြန်မလာ၇သေးဘူးနော်…
ဒီ နှစ် ဒီဇင်္ဘာမှာ ပြန်ဘို့ တော့ စိတ်ကူးထားတယ်..ဆုံမယ်လို့ထင်ပါတယ်
ကိုခေါင်တို့ဆီ တစ်ခေါက်ရောက်ခဲ့ဘူးတယ် ခင်ဗျ
အဲဒီတုန်းက မြန်မာ ၅ ယောက်လောက်နဲ့ ဆုံခွင့်ရခဲ့တယ်
ရွာထဲ ပို့စ် အရှည်ကြီးတင်ဖြစ်ခဲ့တာလဲ အမှတ်တရပဲ
အခုလို ခင်တဲ့အခြေအနေဆို မဖြစ်မနေ လာတွေ့ခဲ့မှာဘဲ
၃ လအတွင်းမှာ ဒီလိုဖြစ်အောင် သင်ပေးလိုက်နိုင်တဲ့ ဆရာကိုရော.. ပေါက်မြောက်အောင် သင်ယူနိုင်တဲ့ တပည့်ကိုရော လေးစားမိတယ်..
သမီး ခပ်ကြောင်ကြောင်တွေ တွေးတတ်တာ ဖေခေါင် သိပါတယ်.. ခုလည်း အဲ့လို တွေးမိတဲ့အတွေးလေးကို ဒီမှာ ပြောလိုက်ဦးမယ်..
သမီးက မပြည့်စုံတဲ့သူတွေ အောင်မြင်လာရင် လေးစားပေမယ့် ပြည့်စုံတဲ့သူက ကြိုးစားတာမြင်ရင် ပိုအံသြမိတယ်.. အောင်မြင်မှုတစ်ခုရဖို့အတွက်က စိတ်ဓာတ်ခွန်အားက အရေးကြီးဆုံးပဲလေ..
မပြည့်စုံတဲ့သူဆိုတာ..အနှိမ်ခံရမယ်.. အပြောခံရမယ်.. ဒါကြောင့် မခံချင်စိတ်နဲ့ မဖြစ်မနေ ကြိုးစားတတ်ကြတာ သဘာဝပဲ… သူတုိ့အတွက်က စိတ်ဓာတ်ခွန်အားရဖို့ တွန်းအားပေးမယ့် ပတ်ဝန်းကျင်က အများကြီးပဲ..
ပြည့်စုံတဲ့သူတွေကျတော့ အများစုက မကြိုးစားချင်ကြဘူး.. မိဘအရှိန်အဝါအောက်မှာ အသာအယာနေလို့ရတယ်.. ဒါပေမယ့် အဲဒီထဲကမှ ဖောက်ထွက်ပြီး ကိုယ့်အားကိုယ်ကိုး ကြိုးစားကြတဲ့သူတွေကို သိပ်သဘောကျတယ်.. ပိုလည်း လေးစားမိတယ်…
နည်းနည်း ခပ်ကြောင်ကြောင် ဖြစ်နေမယ် ထင်တယ်နော်.. ဒါမယ့် သမီးတွေးမိတဲ့ အတွေးပေါ့နော်..
အခုရော ဖေ့တပည့်လေး ဘာတွေလုပ်နေလဲ.. အဆက်အသွယ်ရှိသေးလား..
ပန်းလေးတပွင့်ဆို ဆိုသလောက် လှပအောင် ပျိုးပေးခဲ့တာ အားကျမိပါတယ်၊
ဒီထက်မကတဲ့ ပန်းတွေကိုလည်း လှစေခဲ့မယ်ဆိုတာ မှန်းလို့ရပါတယ်။